Waxbrashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baahi loo qabo in iskuulo cusub waddanka laga dhiso
Kor u kaca ku yimid tirada caarruuraha dugsiyada hoose bilaabaya darteed ayey degmooyinka dalkaani ku khasban yihiin in ay si dhakhsa ah iskuulo cusub u dhisaan.
Ardeyda dalka ku cusub oo ku yar iskuulada gaarka loo leeyahay
Waxaa aad u yar tirada ardeyda dalka ku cusub ee bilowda ama soo gala iskuulada qaaska loo leeyahay.
Qori tuur loo sameynayo ardeyda iskuulada safafka ugu jira
Guddi farsamo oo loo saarey in uu mustaqbalka iskuulada dalkaan ka soo talabixiyo ayaa soo jeediyey in la joojiyo safkii ardeydu u gali jireen iskuulada ay rabaan in ay dhigtaan taas badalkeedana qori tuur loo sameeyo ardeyda iskuuladaas soo dalbata.
Caruuraha iskuulada oo caafimaadkoodu liito
Boqolkii ba lix caruuraha ay da´doodu tahay 15 ayaa dareemaya in iskuulka lagu kadeedo. Sidaas ayaa laga ogaaday baadhitaan uu ururka dhaqaalaha ee OECD amuurahan ka sameeyay
Dugsiyada diimaha ee dalka oo shruudaha lagu adkeeyo
Xisbiga Socialdemokraterna ayaa damac-san in shuruudaha lagu adkeeyo dugsiyada mulkida loo leeyahay ee ku dhisan nidaamka diiniga ah, waxa lagu magacaabo ”religiösa friskolor”.
Gabadhii ugu horreeysay duuliya dagaal muddo 26 sannadood ah
Markii ugu horreeyay ayaa muddo 26 sannadood dabadeed dalka Sweden ay gabar ku guuleeysatay inay qayb ka noqoto ardayda loo tababareyo duuliyeyaal iney ka noqdaan dayuurradaha dagaalka.
Degmooyinka oo ka cagajiidaya shahaadooyinka fasalka afraad
Xiisaha degmooyinka waaweyn ee dalkaan ay u hayaan isku deyga la rabo in deyrta soo socota shahaadooyin lagu soo rogo in ay qaataan ardeyda dhigata fasalka afraad ee dugsiyada hoose/dhexe, ayaa aad u hooseysa.